जिडब्ल्युएमले टप भेरियन्टको हभाल जोलिओन सार्वजनिक गर्दै, यस्ता छन् विशेषता :: Setopati
जिडब्ल्युएमले टप भेरियन्टको हभाल जोलिओन सार्वजनिक गर्दै, यस्ता छन् विशेषता
जिडब्ल्युएमले नेपालमा हभाल जोलिओनको टप भेरियन्ट सार्वजनिक गर्दैछ। आफ्नो कर्पोरेट फिलोसफी ‘इमप्रुभिङ लिटल बाई लिटल एभ्रिडे’ लाई अनुसरण गर्दै नेपालमा जिडब्ल्युएमको आधिकारिक बिक्रेता भि.जी. इम्पेक्स प्रा.लिले नयाँ फिचरहरू सहितको नयाँ हभाल जोलिओन सार्वजनिक गर्ने भएको हो।
झन्डै ६० वटा मुलुकमा कम्पनीले ६५ लाखभन्दा बढी बिक्री भएको हभाल विगत ११ वर्षदेखि चीनमा एसयुभी बिक्री गर्ने नम्बर एक ब्रान्ड हो।
कलात्मक र आधुनिक इन्जिनिरियङबाट निर्मित जोलिओनले गाडीहरूमा नयाँ सोचलाई मुर्तरुप दिने कम्पनीले विश्वास राखेको छ।
गाडीमा १८ इन्चको आल्मुनियम अलोय ह्विल छ। यसको ७३ प्रतिशत बाहिरी आवरण स्टिलले बनेको छ। गाडीमा ६ तरिकाले एड्जस्ट गर्न मिल्ने विद्युतीय ड्राइभर सिट छ।
त्यस्तै गाडीमा भएको प्यानारोमिक सनरुफ र डुअल जोन अटो एसीले आरामदायी यात्रालाई भव्यता थप्ने कम्पनीको भनाइ छ।
१.५ लिटरको पेट्रो टर्बो इन्जिन जडित नयाँ हभाल जोलिओनमा सुरक्षाको लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। गाडीमा ६ वटा एयरब्याग छन्। त्यस्तै यसमा भएको ३६० डिग्री भ्यू, ब्लाइन्ड स्पट मोनिटोरिङ, हिल होल्ड कन्ट्रोल र हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल विशेषताहरू छन्।
गाडीको बाहिरी र भित्री आवरणलाई ध्यानपूर्वक तयार पारिएको कम्पनीले दाबी गरेको छ। यसमा कारप्ले र एन्ड्रोइड अटोसहितको १२.५ इन्चको स्मार्ट टच स्क्रिन पाउन सकिन्छ।
नेपाली बजारमा हभाल जोलिओन स्टार्टिङ भेरियन्ट र हाई भेरियन्ट केही समय अघिदेखि नै उपलब्ध छ। यी गाडीहरूले हालसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको कम्पनीले बताएको छ।
ग्रेट वाल मोटर्स (जिडब्ल्युएम) चिनियाँ अटोमोबाइल्स उत्पादन कम्पनी हो। यसले सन् १९९८ देखि विभिन्न देशमा गाडी निर्यात सुरू गरेको हो। कम्पनीले ६० भन्दा बढी देशमा ५ सयभन्दा बढी वितरकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमार्फत आफ्नो गाडी निर्यात गर्दै आइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २९, २०७८, १२:३५:०९
सार्वजनिक भयो यामाहाको एरोक्स १५५ म्याक्सी स्कुटर, यस्ता छन् विशेषता
दसैंमा घर जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जान कति लाग्छ भाडा?
आइएमई मोटर्सको 'दसैं तिहारको बहार, स्योर सटका साथ बम्पर उपहार' याेजना सार्वजनिक
लामो दुरीका लागि उपयुक्त 'बर्गमन' स्कुटर, के छन् खास विशेषता? (भिडिओ रिभ्यु)
उपत्यकामा सुरु भयो मेट्रो अनलाइन ट्याक्सी